आज शुक्रबार सन्तोषी माँ को दर्शन गर्दै १ शेयर भेटी चढाएर आजको राशिफल पढ्नुस, सोचेको पुरा हुनेछ। -Dainikplus-
आज वि.सं. २०७६ असोज ३ गते शुक्रबार तदनुसार इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर २०,आश्विन कृष्णपक्ष षष्ठी तिथी आजको राशिफल :
अनावश्यक चिन्ताले सताउनेछ । कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ । यात्राको योग रहेको छ । पारिवारिक जीवन सामान्य रहनेछ ।भेटघाट र रमाइलोमा समय बित्नेछ। बोलीचालीमा मिठास आउनेछ। पढाई लेखाइमा रुची बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । प्रभावशाली व्यक्तिहरुसंग सम्बन्ध बढ्नेछ । आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ ।ब्यापार ब्यबसायबाट लाभ मिल्नेछ। भोज भतेरमा जाने अवसर मिल्नेछ। साथीभाईको सहयोगमा महत्वपूर्ण काममा सफलता मिल्नेछ।
रोजगारी प्राप्त हुनेछ । मुद्दा मामिलाको फैसला आफ्नो पक्षमा हुनेछ । स्वास्थ्य तथा पारिवारिक जीवन राम्रो रहनेछ ।शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट लाभ मिल्नेछ। बोलेको काममा सफलता मिल्नेछ। गरेको कामको उचित मूल्यांकन हुनेछ।
मान प्रतिष्ठा बढ्नेछ । काममा प्रगति हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ ।जागिरमा पदोन्नति हुने समय छ। बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा भने केहि समस्या आउने देखिन्छ।
कडा मिहिनेतले काममा सफलता मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुनेछ । नयाँ काम मिल्ने योग रहेको छ ।धार्मिक र सामाजिक काममा ब्यस्त रहनुपर्नेछ। सामाजिक मानसम्मान मिल्नेछ। व्यापार ब्यबसायबाट लाभ मिल्नेछ।
नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ । आत्मविश्वास र मिहिनेतले काममा सफलता मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्ध गाँसिने योग रहेको छ ।धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँको भ्रमण हुनेछ। पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ। तपाइको मेहनत र इमान्दारिताको अरुले प्रसंसा गर्नेछन।
आज वादविवादमा नपर्नु उचित हुनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । काममा कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।अरुले बिश्वास गर्नेछन। केहि गरिहाल्नुपर्ने समय छ। रोकिएका अधुरा कामहरु सुचारु हुनेछन। घरपरिवारका सदस्यले काममा सहयोग गर्नेछन।
वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । साथीभाइका कारणले मन दुख्नेछ । आर्थिक स्थिति सामान्य रहनेछ ।सामाजिक र धार्मिक काममा व्यस्त रहनुपर्नेछ। साथीभाईसंग रमाइलोमा समय बित्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ।
सम्बन्धहरुलाई लिएर गरिने निर्णय आज नलिनु नै उत्तम हुन्छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । काममा बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने छ । सामाजिक काममा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। पारिवारिक सुख मिल्नेछ। शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। कलात्मक क्षेत्रमा राम्रो छ।
करियरमा प्रगति हुने योग रहेको छ । भ्रमण रमाइलो र यादगार बन्नेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ्यले केही चिन्तित बनाउनेछ ।अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। भाग्य बलियो रहनेछ। परोपकारी काममा रुची बढ्नेछ। मन उत्साहित हुनेछ।
काममा परिवर्तनको अवसर आउनेछ, तर नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि आजको दिन उचित छैन । प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ ।नोकरीमा उतारच ढाव आउनेछ। परिवारको सहयोगले महत्वपूर्ण काममा सफलता मिल्नेछ। जग्गा जमिनको कामबाट लाभ मिल्नेछ।
शत्रु परास्त हुनेछन् । आयमा वृद्धि हुनेछ । कार्यस्थलमा नयाँ व्यवस्थापनको आवश्यक रहेको छ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। रोकिएका कामहरु शुचारु हुनेछन। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ।
ग्यास्ट्रिकको लागि बिरेनुन अचुक औषधि: सधै सेवन गर्नले हुन्छ यी रोगहरुबाट टाढा !